Maxaa u dambeeyay darbiga dhul boobka Kiiniya wado: SAWIRO – Xeernews24
Maxaa u dambeeyay darbiga dhul boobka Kiiniya wado: SAWIRO
Waxaa In dhaweyd socdey darbi Kiiniya ka dhisayso dhulka Soomaalida ee xadku sheega iyadoo dhulboob u socoto Kiiniya. Darbigaas ayaa maraya heer aan fiicnayn.
Wax ka yar 20-km ayaa illaa hadda laga dhisay derbigan kaa soo la gaadhsiinayo xadka labada dal oo dhererkiisu gaadhaayo illaa 700-km kaasoo ka bilaabanaya Mandhera illaa degaanka Kiunga oo ku yaalla xeebta gobolka Lamu.
Wararka ayaa sheegaya in derbigan uu hadda soo gaadhay xadka labada dhinac ee degmooyinka Beled xaawo iyo Mandhera.
Dowladda Kiiniya ayaa sheegtay in derbigan uu ka celin doono weerarada ay gudaha dalkaas ka fuliyaan xoogaga Al-shabaab ee ka soo talaaba xadka Somalia.
Waxaa sidoo kale meelo isu muuqda laga dhisayaa koolbo-waardiyo , kadibna waxaa la saarayaa askar qoryaha shiishka wata oo illaalo ah, waxaana intaasi dheer kaamirooyinka CCTV oo lagu xidhayo derbigan si loola socdo dhaqdhaqaaqa xuduuda.
Dhaqaalaha ku baxaya mashruucan oo gaadhaya malaayiin dollar ayaa waxaa dowlada Kenya gacan ka siinaya dowlada Israa’iil oo saaxiib dhow la ah.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/Keniya.jpg 483 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-07 00:28:202017-03-07 00:28:20Maxaa u dambeeyay darbiga dhul boobka Kiiniya wado: SAWIRO
Daawo Ex Wasiir Duur oo lagu Xasuusto Beenti u reer Saylac Duurka ula galay... Saylac oo la wada Aashaqay